Wasiir Maareeye “Waan qaadaneynnaa taladiina, waana u cadaalad-faleynnaa xildhibaannada iyo siyaasiyiinta kala fakarka duwan” – Kalfadhi
Wasiirka Warfaafinta ee xukuumada Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, ayaa maanta hor yimid Golaha Shacabka ee Baarlamaanka, kaddib markii Xildhibaannadu ay u yeereen
Kulanka waxaa shir-guddoominaayaya guddoomiye ku xigeenka kowaad ee Golaha Shacabka mudane Abdiweli Sheikh Ibraahim Muudeey, waxaana ajendaha kulanka uu ahaa Su,aal Oraaheed wasiirka Wasaaradda Warfaafinta iyo soo afjarka Dooda Akhrinta 2-Aad ee Sharciga Doorashooyinka Qaranka.
Su’aalaha la weydiiyay wasiirka waxaa inta badan ay ku saabsanaayeen in xildhibaannada mucaaradka iyo kuwa dowladda taageersan iyo xukuumadda aysan u sineyn warbaahinta Qaranka ee Soomaaliya sida SNTV, Sonna iyo Radio Muqdishu,
Wasiir Maareeye ayaa wax laga weydiiyay howlaha shaqo ee wasaarada gaar ahaan qeybta taleefishinka Qaranka oo xildhibaanada ay ku eedeeyeen inaysan dhexdhexaad u ahayn arrimaha dalka gaar ahaan xildhibaanada.
“Siyaasadda warbaahinta ee dowladda waxaa weeye, in laga oggolyahay fikradaha iyo doodaha kala duwan, Xildhibaannada iyo dadka dowladda ku jirana waxaa si siman loogu oggolyahay in ay shacabka Soomaaliyeed ay kala hadlaan warbaahinta dowladda”, ayuu yiri wasiirka.
“Marka dood ay ka dhacdo golaha shacabka, inta aan kari karno waan ku darnaa warka balse meel kasta waxaa lagu xisaabtamayaa wakhti. Warka SNTV waa 50 daqiiqo ma jiro Televeshin adduunka ah oo 50 daqiiqo war wada. Marka 7-qofood ay meel ka hadasho dhammaantoodana ay rabaa in TV-gga laga siidaayo waxaa ay nagu kaliftay taas in aan warka dheereyno”.
“Xildhibaan kasta oo hadla waxaa uu muuqaalkiisa ku jiraa Barnaamij, war ama barnaamijyada todobaadlayaasha ee TV-gga”, ayuu yiri.
Wasiir Maareeye ayaa sheegay in ay qaadanayaan taladda ah in ay u cadaalad falaan xildhibaannada iyo siyaasiyiinta kala fakarka duwan isla markaanna ay u sinnaadaan warbaahinta dowladda.